Ciidamo ka tirsan xoogga dalka oo gaaray deegaan hoos-taga Ceelbuur - Jowhar Somali news Leader
Home News Ciidamo ka tirsan xoogga dalka oo gaaray deegaan hoos-taga Ceelbuur
Maamulka Galmudug ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah Al-Shabaab oo looga saarayo deegaanada ay gacanta ku hayeen, iyadoo maalintii shalay Ciidamo ka tirsan qeybta 21aad ee ciidanka xoogga dalka ay gaareen deegaano hoos-taga degmada Ceelbuur.
Madaxweyne kuxigeenka Galmudug Cali Daahir Ciid iyo Wasiirka Amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi oo ay wehliyaan Ciidamo ka tirsan qeybta 21aad ee xoogga dalka iyo Ciidanka Galmudug ayaa gaaray deegaanka Bulacle ee hoostaga degmada Ceelbuur.
Wasiirka Amniga Galmudug Axmed Fiqi ayaa sheegay in deegaanka Bulacle ay u tageen sidii loo bilaabi lahaa dagaal ka dhan ah Al-Shabaab si looga saaro deegaanada ay kaga sugan yihiin Galmudug.
Axmed Fiqi ayaa sheegay in Al-Shabaab aysan awood weyn ku laheyn degaannada Galmudug, isagoo xusay in ciidanka dowladda ay u diyaarsan yihiin inay ka hortagaan dhibaatooyinka ay geysanayaan.
Maalintii shalay ayay aheyd markii xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerareen deegaanka Shabeellow oo illaa 20KM u jirta deegaanka Bacaadweyn ee Gobolka Mudug, waxaana halkaas ka dhacay dgaaal dhex maray Al-Shabaab iyo dadka deegaanka, iyadoo markii dambe dagaalka ku biireen Ciidamada xoogga dalka.